Cuntooyinka Vitamin B: Sidee lagu helaa noocyada kala duwan | Ragga Stylish
Cuntooyinka leh fitamiin B waxay muhiim u yihiin habsami u socodka jirkaaga, laakiin Miyaad cunaysaa nafaqo ku filan nafaqadaas, oo la xiriirta faa'iidooyin badan?
Kuwa soo socdaa waa xulashooyinka cuntada ee hodanka ku ah fiitamiinnada B, kaasoo kaa caawin doona inaad cuntadaada ka dhigto mid dhammaystiran oo nafaqo leh, iyo sidoo kale helitaanka dhammaan faa'iidooyinka fitamiin B.
1 Maxaa fitamiin B loogu talagalay?
2 Cunnooyinka folate
3 Cunnooyinka leh fitamiin B6
4 Cunnooyinka leh fitamiin B1
5 Cunnooyinka leh fitamiin B2
5.1 Sida loo helo fitamiin C
6 Cunnooyinka leh fitamiin B3
7 Cunnooyinka leh fitamiin B7
Maxaa fitamiin B loogu talagalay?
Faytamiinnada B-du waxay door muhiim ah ka ciyaaraan, iyagoo kaa caawinaya inaad haysato wax kugu filan tamar ku filan oo aad ku wajahdo dhammaan caqabadahaaga maalinlaha ah oo leh dammaanad Adigoon ku dhicin daal iyo daciifnimo marka ugu horeysa.
Sidoo kale Faa'iidooyinka ay u leedahay socodka iyo xiidmaha mindhicirka ayaa mudan in la sheego. Taasina waa in la'aanta fitamiin B12 ay sababi karto calool istaag, halka aadan qaadan folate ku filan waxay la xiriirtaa niyadjab, dhibaatooyinka kale.
Marka loo eego waxaa lagugula talinayaa inaad hubiso qiyaas wanaagsan oo fiitamiin B ah maalin kasta, sidaa darteed hoosta waxaan ku soo qaadaneynaa cuntooyin badan oo hodan ku ah noocyada kala duwan ee fiitamiin B (qoys ballaaran oo xubnaha oo dhami ay si isku mid ah muhiim u yihiin) si aad ugu dari karto cuntadaada haddii aad u malaynaysid inaadan ku filnayn.
Xaqiiqdii waad maqashay folate dhowr jeer, laakiin waxa uusan qof walba ogayn waa inay tahay fitamiin koox B. Folate ama folic acid ayaa fure u ah cuntada dadka (haddii ay xaaskaagu uur leedahay, hubi inay qaadato ku filan si looga hortago cilladaha dhalashada). Sideed ku heli kartaa folate? La soco cuntooyinka soo socda:
Spinach iyo khudaarta kale ee caleemaha madow
Waxa kale oo aad ka heli kartaa fiitamiinkan B ee badarka adag. Sida kuwa kale, waa nooc fudud oo la heli karo, sidaa darteed Haddii aad cuntid cunto caafimaad leh oo noocyo kaladuwan leh, waa inaadan wax dhibaato ah kaheyn bixinta jirkaaga qadarka uu ubaahanyahay maalin kasta..
Cunnooyinka leh fitamiin B6
Faytamiin B6 la'aanta waxay leedahay cawaaqibyo dhowr ah, laga bilaabo xaalad jahawareer ah ilaa niyadjab, iyada oo loo marayo fursadda sii kordheysa ee cudurada lagu qaado. Dadka badankood waxay ku filan yihiin fitamiinkan dhibaato la'aan, waxaa laga helaa qadar sare oo ah cuntooyinka sida kuwan soo socda:
Cunnooyinka leh fitamiin B1
Sidoo kale loo yaqaan thiamine, fiitamiin B1 waa mid aad muhiim ugu ah maskaxda inay u shaqeyso si sax ah oo caafimaad leh. La'aanta ayaa sidoo kale kaa dhigi karta inaad dareentid daciifnimo iyo daal ka badan sidii caadiga ahayd. Waxaad ku heli kartaa fitamiin B1 cuntooyinka soo socda:
Bariis la xoojiyey
Dhinaca kale, waa in la ogaadaa taas Ku-xadgudubka khamriga wuxuu ka hortagi karaa jirka inuu nuugo ku filan nafaqadanMarka tani waa sabab kale oo loo adeegsado cabbitaanka khamriga.
Cunnooyinka leh fitamiin B2
Aasaasiga u ah gobolka beerkaaga iyo nidaamkaaga neerfaha, fitamiin B2 ama riboflavin badanaa kama maqnaadaan cuntada reer galbeedka. Si kastaba ha noqotee, hubi inaad dhab ahaantii ka hesho ku filan maalin kasta cuntooyinka sida:
Cuntada fitamiin B2 laga helo tiro aad u badan waa beerka, laakiin haddii aadan taageere weyn u ahayn cunnadan (wax aad ugu dhowdhow), ha ka welwelin, maadaama kuwii hore aad dabooli karto baahidaada riboflavin ee maalin kasta dhib la'aan.
Sida loo helo fitamiin C
Fiiri maqaalka: Cuntooyinka leh fitamiin C. Halkaas waxaad ka heli doontaa habab badan oo aad nafaqadan ugu biirin karto cuntadaada, maxaa yeelay haddii fitamiin B ay muhiim u tahay caafimaadkaaga, fiitamiin C sidaas ugama yaraado.
Cunnooyinka leh fitamiin B3
Mid ka mid ah doorarka ugu muhiimsan ee cunnadu waa inay na siiso tamar, iyo fiitamiin B3 ama niacin ayaa door weyn ka ciyaara hawshan na siisa xoog. Waxa kale oo ay leedahay faa iidooyin ku saabsan habsami u shaqaynta dheef-shiidka waxayna ka caawisaa in maqaarka iyo neerfayaasha xaalad fiican ku hayaan. Laakiin cuntooyinkee laga helaa? Qoraal ka samee booqashadaada xigta ee supermarket-ka:
Cunnooyinka leh fitamiin B7
Muddooyinkii dambe waxaad barkintaada ka heshay timo ka badan intii caadiga ahayd, shanladaaduna sidoo kale way ka buuxsamayaan marka aad timaha shanlayso subaxa hore? Khaladku wuxuu noqon karaa la'aanta fitamiin B, gaar ahaan fitamiin B7 ama biotin. Sidoo kale waa nafaqo muhiim u ah Lakabyada maqaarka, laakiin shaqooyinka aadka ugu habboon caafimaadkaaga waxay la xiriiraan ilaalinta heerarka kolestaroolka wanaagsan iyo shaqada wadnaha ee caafimaadka qabta.
Si timahaagu u ilaashadaan cufnaantiisa, cuntooyinka soo socda ee hodanka ku ah fitamiin B7 kama maqnaan karaan cuntadaada. Xusuusnow inaadan qaadan wax badan, faa iidooyinkeedu way sii weynaan doonaan, laakiin waxaa lagugula talinayaa inaad hubiso qiyaas wanaagsan oo maalinle ah timaha iyo caafimaadka guud ahaan:
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Cuntooyinka leh fitamiin B
Sida looga hortago cudurka macaanka